Xinhua Myanmar - RCEP သည် တရုတ်-အာဆီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုလျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဟု စင်ကာပူပညာရှင်ပြောကြား
RCEP သည် တရုတ်-အာဆီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုလျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဟု စင်ကာပူပညာရှင်ပြောကြား
တရုတ် အာဆီယံ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး RCEP
၁၇ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပရာ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နန်နင်းမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ပြပွဲစင်တာ အတွင်း ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနေသူများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
စင်ကာပူ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု(RCEP) လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) အကြား စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အရှိန်အဟုန်သစ်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုများ ရှိနေလင့်ကစား တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် ၊ အရှေ့အာရှရေးရာဌာနမှ အကြီးတန်းသုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Yu Hong က ပြောကြားခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် RCEP ဖြင့် မကြာသေးမီက သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက် ပိုမိုထောက်ခံအားပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ ဒါက တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေး နဲ့ကုန်သွယ်ရေး ဆက်ဆံမှုတွေမှာ ပြန်ပြီး လှုပ်ရှားသက်ဝင်လာတာကို ဖော်ညွှန်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ နှစ်ဖက်အကြား စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကြီးမားတဲ့အလားအလာရှိနေခြင်းကို ဖော်ပြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု Yu က ဆိုသည်။
တရုတ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား အခြေခံအဆောက်အဦ ၊ ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေး ၊ စက်မှုကုန်ထုတ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကြီးမားသောအလားအလာရှိနေခြင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် မြင့်မားစွာ အတူတကွ အပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
RCEP လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ နှင့် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်သားအင်အား လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူ အာဆီယံနိုင်ငံများအတွက် အကူအညီအထောက်အပံ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့၏ စက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို ပိုမိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထိုအရာက အာဆီယံနိုင်ငံများအတွက် ဒေသတွင်း နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကို ပေါင်းစပ်ဖော်ဆောင်ခြင်းကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
RCEP က တရုတ် နှင့် အာဆီယံ ကုမ္ပဏီများအတွက် ဒေသတွင်း ဈေးကွက်များတွင် ပိုမိုချည်းနင်းဝင်ရောက်ရန် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ခက်ခဲသောအခြေအနေတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်အောင် “ခိုင်ခိုင်မာမာလျင်လျင်မြန်မြန်တိုးတက်မှု” ကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း Yu က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမျှော်လင့်ချက်များ နှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများသည် သူ၏ ကြီးမားသောဈေးကွက်ကို ပေးရန် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုများတွင် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ တိုးမြင့်ပါဝင်နိုင်ရန် အာဆီယံနိုင်ငံများအနေဖြင့် အကောင်းဖက်က ရှုမြင်လျက်ရှိလျက်ရှိကြောင်း Yu က ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သော လ နှောင်းပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း နန်နင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၁၇ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲကို Yuက မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး ယင်းပြပွဲသည် တရုတ်-အာဆီယံနှစ်ဖက်အကြား စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အရေးကြီးသောစင်္ကြံတစ်ခုဖြစ်ခြင်း ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ထုတ်ကုန်များကို တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်ထဲတင်သွင်းရန် ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို တရုတ်နိုင်ငံ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများက ပိုမိုသိရှိ နားလည်အောင် ကူညီပေးနိုင်ခြင်း နှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လတ်တလောသွားနေသည့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်း နှင့်အတူ ပြပွဲ၏ ယခုနှစ်တွင် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း ဖော်ဆောင်မည့် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအပေါ် အဓိက ဦးတည်ချက်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ နဲ့ နည်းပညာပိုင်း အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ် ၊ ဒါက အာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်တွေကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါနယ်ပယ်(ဒီဂျစ်တယ်) တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက နှစ်ဖက်စီးပွားရေး ၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် မောင်းနှင်အားသစ်တစ်ခုဖြစ် လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း Yu က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
#တရုတ်,#အာဆီယံ,#ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး, #RCEP #Chian, #ASEAN, #RCEP, #Digital economic, #Free-trade, #Expo, #ဆင်ဟွာ
SINGAPORE, Dec.7(Xinhua) -- The signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) has injected new momentum into the economic and trade cooperation between China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries,aSingapore scholar said inarecent interview with Xinhua.
(1) People visit the 17th China-ASEAN Expo at Nanning International Convention and Exhibition Center in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 30, 2020. (Xinhua/Cao Yiming)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
Next Article ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြု လူနာသစ် မတွေ့ရှိဟု ဆို